Dawlada Maraykanka ee dabcisay xayiraadda gargaar-gaasiinta dhulka Al-shabaab maamulo. – Radio Daljir
Dawlada Maraykanka ee dabcisay xayiraadda gargaar-gaasiinta dhulka Al-shabaab maamulo.
Washington, Aug 03 – Maamulka m/weyne Obam ayaa dabciyey xeerarka argagaxisada taasoo u ogolaanaysa in kooxa gurmad degdega ah ay mucaawino ka qaybiyaan koonfurta waddanka Somalia, iyadoo qaar ka mid ah gargaarkaasi loo leexinayo dhulka ay maamulaan kooxda xagjirka ah ee Al-shabaab .
Maraykanka ayaa horay uga gaws-adaygay gargaarka meelaha ay maamulaan dhaqdhaqaaqa Al-shabaab ee Mintidka ah oo doonaya in ay af-gambiyaan dawladda sharciga ah ee Somalia.
Dhulka ay maamusho Al-shabaab ayaa la sheegay in ay ku gaajaysanyihiin dad gaaraya 2.2 Million oo Somali ah, waxana ururukaasi uu sannadkii hore hay?adaha gargaarka u sheegay in ay ka baxaan meelah ay iyagu maamulaan.
Wasaaradda arrimaa dibadda ee dalka Maraykanka oo ururuka Al-shabaab ku dartay liiska ururada argagaxisada ayaa sheegatay in sharciga Maraykanku diidanyahay in mucaawino la siiyo dadka argagaxisada ah, waxaana ururka Al-habaab horay loogu eedeyey in uu lacago cashuur iyo baad ah kusoo rogo hay?adaha gargaarka ee mucaawinada ka wada meelaha ay maamulaan.
?waxaan raadineynay in aan xaqiijino in dhinacyada aan kala shaqaynao gargaarka insaaniga ah aysan ka baqanin wax maxkamadayn ah oo kaga timaada waaxda khasaanada ee dalka maraykanka iyo shuruucdeeda , haddii ay ku lugyeesaan dadaalada gargaarka ee somalia ? sidaas waxaa shir jaraa?id saxafiyiinta ugu sheegay sarkaal sare oo ka tirsa maamulka Maraykanka.
Waxana uu intaa ku daray ? waxaan dooneynaa in aan samayno wax kasta oo aan uga hortegeyno in gargaarka la leexsado, waxaana muhiimad siineynaa dadka dhibaataysan?
Sarkaalkan ayaa diiday in uu wax sharraxaad ah kasii bixiyo siyaasadda cusub ee dawlada waddanka Maraykanka, laakiin Maraykanka ayaa la shaqaynaya ururrada aan dawliga ahayn iyo hay?adaha caalamiga si gargaarka loo gaadhsiiyo dadka u baahan ee soomaaliyeed.
Ha?adda Qaramada midoobey ugu qaabilsan carruurta ayaa sheegtay in 800,000 ( sided boqol oo Kun ) oo carruur somaliyeed ah qarka u saaranyihiin in ay macaluul iyo nafaqa-darro u dhintaan.
Alshabaab ayaa hore u sheegtay in ay dib u eegayaan siyaasaddii ay kula macaamilijireen hay?adaha caalamiga ah oo ay ogolaanayaan gargaarka caalamiga ah, laakiin markii arrinkaasi niyadgeliyey dadka Somalida ah ee baahan iyo beesha caalamka ayaa ururkaasi xagjirka ah bandhigaasi ka noqday, waxana uu sheegayaa in arrinta laga badbadnayo.
Dawlada Maraykanka ayaa iminka siineysa Somalia $80 malyuun oo dollar, waxaa deeqdaasi qayb ka tahay lacag dhan $459 Malyuun oo dollar oo lagu gargaarayo abaaraha iyo xaaladda degdegga ah ee ka jirta Geeska Africa.
Dhinaca kalena xoghayaha guud ee hay?adda bisha cas ee dalka jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran Zaher Rostami ayaa sheegay in ay gargaar la gaaryaan dadka macaluushu ku dhifatay ee Somalia.
Zaher Rostami, Isagoo la kulmay diblamaasiga ugu sareeya ee soamlia ka jooga Tehran Khaliif Muusa ayaa waxa uu sheegay in mucaawino gargaar ah oo ay diyaariyeen Bisha Cas ee Iran iyo shaqsiyaad reer Iran ah loo dirayo sida ugu dhaqsaha badan dalka Somalia.
Labada sarkaal ayaa ku heshiiyey in mucaawinada laga qaybiyo dadka macaluushu ku haystao ee Somalia ama xadka Somalia iyo Kenya.
Xoghayaha guud ee bisha cas ee Iran Zaher Rostami ayaa sidoo kae sheegay in koox caafimaad dhakhaatiir iyo kalkaaliyaal ah ay u dirayaan Somalia, islamarkaana ay halkaasi ka asaasayaan isbitallo ku meelgaar ah.
Khaliif Muuse oo ah danjiraha Somalia ee Iran ayaa si weyn u bogaadiyey kaalinta walaaltinimo ee qaranka Iran, hogaamiyaha sare ee Aayatulaah Cali khomeyni iyo hogaamiyaash diinta ee dalkaasi.
Qramada Midoobey ayaa horay ugu dhawaaqday in laba gobol oo Somalia kamid ah ay ka jirto heerka waxa loo yaqaan ?macaluul? waxana shalay haweyneyda ugu qaabilsan xoghayaha guud ee Qaramada Midoobey arrimaha gargaarka degdegga ah ee Valerie Amos sheegtay in macaluusha Somalia suuragaltahay in ay ku fiddo lix gobol oo Somalia kamid ah haddii aan si deg-deg ah looga jawaabin masiibadaasi banii?aadantinimo.